စာမေးပွဲမှာ စာခိုးနည်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စာမေးပွဲမှာ စာခိုးနည်းများ
Posted by panpan on Jul 21, 2011 in Creative Writing, Education | 18 comments
တချို့ နည်းတွေက ရိုးနေလို့ ပုံမတင်တော့တာ
လူတော်တော်များများက အသုံးပြုတဲ့နည်းတွေမို့ မတင်လိုက်တော့ဘူး
ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲမှာ အဲလိုလိုက်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့….
သိပ်မထူးဆန်းပေမယ့် အသေးစိတ်ကျလို့ သဘောကျတယ်
အသုံးပြုရလည်းလွယ်သလို လူလည်း သိပ်မမိနိုင်ဘူး
ဒီနည်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုံချည်တွေနဲ့ဆိုတော့ လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး
ဘယ်လိုကဘယ်လို လုံချည်ကြီးလှန်မလဲတော့ မသိပါ
ကိုယ်တိုင်ရေးတာထက် တခြားလူကရေးပေးရင် ပိုအဆင်ပြေမယ် (ဒီနည်းအသုံးတည့်ရင် မိတ္တူဆိုင်တွေလို လက်သည်းပန်းချီဆိုင်တွေလည်း လူစည်လာနိုင်မယ်)
နောက်ဆုံး ဒီနည်းလေးကတော့ ဆိုးတယ်
စာမေးပွဲဖြေတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ပိုက်ဆံအိတ်တွေလာကိုင်ကြည့်လိုက်
ဘောပင်ထည့်တဲ့အိတ်လေး လာမွှေလိုက် (အထူးသဖြင့် ဆရာမတွေပေ့ါ)
တခါတလေများ ကျောင်းသားကဒ်လေးတောင် စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်သေးတာ
ရွာထဲက ကျောင်းသားတွေရှိရင် စာမေးပွဲဖြေရင် အဲလိုမလုပ်ကြနဲ့နော်…..
နွယ်ပင်ကတော့ တစ်ခါမှ စာ မခိုးချဖြစ်ဘူးလို့ ပြောရင်ယုံပါ့မလား
မခိုးချချင်တာမဟုတ်ဘူး မခိုးချရဲတာ တစ်ခါကတော့ စာမေးပွဲခန်းထဲကို ပုံသေနည်းလေးတွေ
ကူးပြီး ယူသွားဖူးတယ် စောင့်တဲ့ ဆရာမကလဲ လွတ်တယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘာကိုယ်ကြောက်ပြီး
ရေးထားတာတွေကို မမြင်ရတော့ဘူး အဲလို သတ္တိကောင်းတာလေ
နောက်ဆုံးဆရာမက ပါတာဖြဲယူထား မပါရင် တစ်အုပ်လုံးပေးဆိုတာတောင်
ကြိုးစားလေ့ကျက် မှ သာရတာပါပဲ။။
အင်း…. ကျတော်ကတော့ အောက်ဆုံးနည်းလေးကို အကြိုက်ဆုံးဘဲဗျာ….
ဘောပင်ပေါ်မှာရေးတဲ့ နည်းက နေ၀န်းနီတို့ 1992 လောက်ကတည်းကလုပ်လာတာ…။ ဇောင်းလေးတွေပေါ်မှာ ကညစ်နဲ့ ရေးရတယ်…။ စိတ်ရှည်ရတယ်..။ နောက် ခါးကပ်တဲ့ တိပ်ပေါ်မှာလည်းရေးတယ်..။ ဘယ်မှာကပ်သလဲဆိုတော့ ပေါင်မှာ ကပ်ထားတာ..။ အဲ… အဲဒိတုန်းက လုံချည်ပဲ ကျားကျား..မမ ၀တ်ကြတာဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ထားတ်ာမှတ်လဲ လုံချည် ချုပ်ရိုးကို အထဲက ထားဝတ်ပြီး ဖြည်ထားတယ်ဗျာ…။ စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်တော့ အဲဒိ ချုပ်ရိုးဖြည်ထားတာလေးကို အသာလှပ်လိုက်ရင် ပေါင်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ခါးကပ် ပလာစတာနဲ့ ကွက်တိ…။ ကျောင်းသားလုပ်နေရင် ဆရာမ မဖမ်းရဲဘူး..။ ကျောင်းသူဆိုရင် ဆရာအနားမကပ်ရဲဘူး..။ လက်တွေ့ လုပ်ဖူးတယ်..။
စောစောက ပြောရောပေါ့.. ၉၂ လောက်တုန်းက ၂တန်းလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။
စာမေးပွဲတော့ တခါမှ မခိုးဘူးဘူး.. တက္ကသိုလ် ရောက်မှ တနေ့ ၅၀၀ ပေးရလို့ သူများ ဆီက စာရွက်ယူပြီး ကူးထည့်ပေးလိုက်တာ..
ကုမ့္ပဏီတစ်ခုမှာ Export/Import Agent လုပ်နေချိန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက အဆောင်မှာ ငှားနေတုန်း စာမေးပွဲကာလဆို နေ့ တိုင်းမြင်နေရတာ စာရွက်တွေဖွေးလို့ ..
ကိုယ်တွေလိုပါဘဲလားလို့ တွေးမိတယ်… 1993-1996 အဝေးသင်ဖြေတုန်းက ကိုယ်တို့ လူစု မိတ္တူဆိုင်တွေမှာ မိုက်ခရိုချုံ့တိတ်နဲ့ ကပ် တအောင့်နေရေစိမ်ထား ပြီးတော့ စက္ကူတွေကိုခြစ်ထုတ်.. နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီတိပ်ပေါ်မှာ စာတွေကျန်ခဲ့ရော.. ဘယ်မှာကပ်ကပ် အဆင်ကိုပြေလို့ …..
နောက်တနည်းက တခါရေးဘောပင်ပေါ်မှာ ထောက်ဆူးနဲ့ တမျက်နှာနှစ်ကြောင်းရအောင်ရေးခဲ့တာ.. သိပ်မဆန့် နိုင်တာကြောင့် လက်ရေးတိုနည်းနဲ့ ဘောပင်ထက် အက္ခရာတင်ခဲ့တာ .:D. စာမေးပွဲခန်းထဲ ပြန်ကူးရေးတော့ တခါတလေ မမြင်ရရင် လက်နဲ့ ပွတ်လိုက်.. ဂျီးတွေ ဝင်ပြီး စာလုံးလေးတွေ ပေါ်လာရော…
လက်တွေ့ ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးနည်းက ဘာဂျာခေါက်.. အရမ်းဣနြေ္ဒရတာ :D.. ဝတ်လိုက်တော့ ရှပ်ဖြူ ကော်လာကတုံး၊ ယောပုဆိုးနဲ့ခိုးချလိုက်တာလည်း အပုဒ်တိုင်း.. ဒါတောင်ကျူရှင်မှာ ဆရာက ပြောပြီးသား “ဒီ ၈ ပုဒ်ထဲ က ၅ ပုဒ်ပါမယ်” လို့ .. ကျက်မယ်ထင်လား??? အပုဒ်တိုင်း ကူးထားပြန်ရော….
စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူကူးထားတဲ့စာတွေ နေရာမမှတ်မိလို့ လက်ဖဝါးမှာ မြေပုံအညွှန်းလုပ်ပြီး(ခါးကစာရွက်က ဘယ်အပုဒ်၊ ဖိနပ်ကြားထဲမှာက ဘယ်အပုဒ်.. စသည်ဖြင့်) ရေးထားတာ ဆရာမ တွေ့ တော့ အကုန်ထုတ်ခိုင်းတယ်.. ကိုယ်တွေ တွေ့ တော့ ရယ်စရာဘဲ.. သူ့ မှာတော့ ဒုက္ခရောက်လို့ .. ဘာကူးစရာ စာရွက်မှ မကျန်တော့တာကိုး :D.. တချို့ ဆို ပုဆိုး၊ ထမီတွေပေါ်မှာတောင်ရေးကြတာ..
ပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့ ရယ်စရာဘဲ.. မကောင်းမှန်းသိတယ် ဒါပေမယ့် အလွယ်လိုက်ချင်လွန်းလို့ .. စာမေးပွဲဖြေပြီး ကိုယ့်အခြေအနေကို အားမရရင် ဆရာ၊ဆရာမတွေကို သတင်းပို့ ထားလိုက်ကြတာဘဲ..
စဉ်းစားကြည့်လေ.. တနှစ်လုံးစာအတွက် Hand-Out, Study Guide စာအုပ်တွေပေးထားပြီး စာမေးပွဲ နီးကာမှ အနီးကပ် ၁၀ ရက်တက်ပြီး စာမေးပွဲဖြေခိုင်းတာ.. မြန်မာပြည်ရဲ့ ပညာရေး စနစ်မကျတာကြောင့် ကိုယ်အပါအဝင် တချို့ တွေ အလွယ်လိုက်ကြတာ..
အောက်ဆုံး က နည်း နဲ့ ခိုးတဲ့ ကျောင်းသူ လေး တွေ ရှိမယ် ဆိုရင်
သူတို့ ဖြေမယ့် စာမေးပွဲ အခန်း ကို အခမဲ့ စာမေးပွဲ အခန်းစောင့် လုပ်ချင်မိသား နော် ။ ဟီဟိ
ဘောလ်ပင်ကိုယ်ထည်မှာ သံချွန်နဲ့ရေးတဲ့နည်းရယ်၊ လက်နှစ်လုံးဗျက် စာရွက်အရှည်ခေါက်ပြီး လက်ကြားထည့်တဲ့နည်းတွေကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ စာများများဆန့်အောင် အတိုချုံးရေးရလို့ ဘယ်နည်းသုံးသုံး ခိုးချမဲ့စာနဲ့ရင်းနှီးနေမှ အဆင်ပြေတယ်။ ခိုးချခဲ့တာများလွန်းလို့ စာမေးပွဲဖြေမဲ့ခါနီးတောင် ဘယ်ဘာသာ ဘယ်နေ့မှန်းမသိ၊ စာလုံးဝမကျရသေးလို့ ခဏခဏ အိမ်မက်မက်တယ်။ မက်နေရင်းနဲ့မှ ငါဘွဲ့ရပြီးသားလို့ အသိစိတ်ဝင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဖြေခဲ့တဲ့ စာမေးပွဲကိုပြောတာနော်။ ယူအက်စ်မှာလည်း တချို့ဆရာတွေက စာမေးပွဲမှာ ဖော်မြူလာ၊ ပုံသေနည်းတွေကို စာတမျက်နှာ ယူခွင့်ပေးတယ်။ အဲဒါကို ကျောင်းသားတွေက cheat sheet လို့ခေါ်တယ်။ အတန်းတခုမှာ ပရော်ဖက်ဆာက cheat sheet သုံးခွင့်ပေးတယ်။ ကျောင်းသားအများစုက အခွင့်ကောင်းယူပြီး mid term စာမေးပွဲမှာ အပိုတွေထည့်ကူးကြတယ်။ ဖိုင်နယ်ကြတော့ ဆရာက စာမေးပွဲမစခင် တဦးချင်းစီရဲ့ စာရွက်တွေကို လိုက်စစ်ပြီး သူသဘောမကျတဲ့ စာရွက်တွေကို ဒေါသတကြီးနဲ့ သိမ်းပြစ်တယ်။ ရိုးသားကြိုးစားတဲ့ ကြောင်ကြီးစာရွက်ကိုတော့ ဆရာက ချမ်းသာပေးလိုက်တယ်။ ရလဒ်က ကျောင်းသားအများစု ဖိုင်နယ်မှာ ဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ cheat sheet ကို mid term exam အလွဲသုံးလို့ရတဲ့ အရှိန်နဲ့ အတော်များများက သာမန်ဖော်မြူလာလေးတွေကိုတောင် ခေါင်းထဲမထည့်ခဲ့ကြဘူး။ တရက်ထဲ နှစ်ဘာသာဖြေရတာမျိုးဆိုတော့ ဝိတ်လျော့လို့ရတာကို လျော့ကြတာပေါ့။ အတွက်ကို အားပြုတဲ့ စာမေးပွဲဆိုတော့ ဒင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး၊ အများစု ထိုင်နေရတယ်…
စာခိုးချတာ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး … မျက်စိကောင်းတဲ့လူမှ မဖြစ်မှာ … ။
အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက မလုပ်ဖူးပေမဲ့ …. တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်တုန်းက နံကြားထောက်စာကျက်ပြီး ကူးချဖူးတယ် … တိတ်ခွေ အကြီးကြီးနဲ့လေ… ဘယ်အခန်း ဘယ်ဆရာမကျမှာလဲ ကြိုသိလို့ … အပျော်လုပ်ကြတာ … ။ လုပ်နည်းက လွယ်ပေမဲ့ …အလုပ်ရှုပ်တယ်… မခိုးချပဲ စာကျက်လိုက်တာတောင် ဒီလောက် အလုပ်မရှုပ်ဘူး … ဒါပေမဲ့ ပျော်စရာတော့ကောင်းတယ် ကျောင်းသားဘ၀စာခိုးတဲ့ ရင်ခုန်စရာ ဖီလင်လေး မရလိုက်မှာစိုးလို့ …. လုပ်လိုက်ရပါတယ် … အဟီး
2001-2002 လောက်က ကြုံခဲ့ဖူးတယ် မန်းတက္ကသိုလ်( အဝေးသင် )်မှာတုန်းက ခိုးနည်းက ၇င်ခုန်ဖို.ကောင်းတယ် မနက်ဖြန်ဖြေ၇မဲ.ဘာသာကို ညဘက်မှာတည်းက ဖယောင်းတိုင်ကိုယ်စီနဲ. ကိုယ်.ခုံမှာကိုယ်သွားေ၇းထားကြတယ်။တချို.ဆိုကိုယ်တိုင်တောင် မကူးဘူး တစ်ပုဒ် 200 နဲ.ေ၇းခိုင်းတယ်..
ပ့ဆိုး ထမီ မှာ laser printer နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ sticker ကပ်သွားတဲ့ နည်းရယ် .. micro copying လုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေရယ် .. ကွန်ဗာဘူးမှာ sticker ကပ်ထားတဲ့နည်းရယ် .. အင်္ကျီလက်ရှည် ၀တ်ပြီး အသားမှာ sticker ကပ်တာ ..
လက်သည်းမှာတော့ CD writer pen နဲ့ ရေးလို့ရတယ် မင်မပျက်ပါ
ကိုယ်တိုင် မလုပ်ဖူးသော်လည်း ကလေးတွေ လုပ်နေတာကို တွေ့ဖူး ကြားဖူးလို့ မျှတာပါ
ပျော်ချင်တဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ အတွက် လုပ်နည်းမျှဝေလိုက်ပါတယ်… သိပြီးသူတွေ လည်း ရှိသလို မသိသေးတဲ့လူတွေ အတွက်ရည်ရွယ်တာပါ ။
ဘာဂျာခေါက်က်တော့ လူတိုင်းသိမှာပါ … အေဖိုး တရွက်ကို ကော်လံ လေးခုစာလောက်ခွဲပြီး စာရေးတာပါ…ပြီးတော့ …. ကော်လံတွေကို ကပ်ကြေးနဲ့ ညှပ် ပြီး ဘာဂျာခေါက် ခေါက် ယူသင့်တဲ့နေရာ ဖွက်သွားရမှာပါ …။
နောက်တစ်ခုကတော့ …တိတ်ပြားကြီး စာ ကော်လံတွေ ခွဲပြီး အေဖိုးစာရွက်အပြည့် စာရိုက်ရမှာ …ပြီးတော့မှ …စာရွက်ကို လိုသလောက်ညှပ်ပြီး … စာပါတဲ့ မျက်နှာဘက်ဖြမ်းကို တိပ်ရဲ့ ကော်ပါတဲ့ အခြမ်းနဲ့ ကပ် … ပြီးတော့… ပြင်ညီတစ်ခုမှာ စာရွက်နဲ့ တိတ်တွေကို ပြန့်ပြန့်လေးကပ်အောင်ဖိပေး …ခဏကြာတော့ … လိုသလောက် စာပိုဒ်တွေ ခွဲပြီး …အဲ့ဒီစာရွက်စက္ကူကပ်လေးကို ရေစိမ်လိုက် … ။ စာမေးပွဲဖြေမဲ့ မနက်မှ ရေစိမ်လျှင် ပိုကောင်းတယ် … ။ ရေစိမ်ပြီးတဲ့ တိပ်စာရွက်တွေကို စက္ကူတွေပြန်ခွာလိုက် … အဲ့ဒီအခါ … တိပ်ပြားပေါ်မှာ စာလုံးမည်းမည်းလေးတွေ ကျန်နေလိမ့်မယ် … ။ အဲ့ဒီတိပ်ပြားကို လိုတဲ့နေရာမှာ ကပ်သွားပြီး အဆင်ပြေသလို ကြည့်လှုပ်ရှားပေါ့… ။အ ခန်းထဲရောက်ရောက်ခြင်း စားပွဲအောက်ခြေမှာနေရာမှတ်ပြီး ကပ်ထားလိုက် … လျှင်သလို လုပ်ကြည့် … ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ် …ရင်တမမနဲ့ … ဆရာမမိလျှင် အရှက်ပါကွဲမယ် ဟားဟား
ဘာဂျာခေါက်ပြီး ယူသွားတဲ့စာရွက်တွေများဆို စာမေးပွဲဖြေပြီးရင် လမ်းတလျှောက် ပလူပျံနေတာပဲ
naywoonni ရေ အတူတူပဲဗျ။ ထိုနည်း၎င်းလုပ်ခဲ့တယ်။(၁၉၉၅)က။